I Debora sy i Baraka
“Ary Debora sy Baraka, zanak’i Abinoama, dia nihira tamin’izany andro izany ka nanao hoe: noho ny fitarihan’ny lehibe tamin’ny Isiraely sy ny fahazotoan’ny vahoaka nanolo-tena, dia miderà an’i Jehôvah” Mpits. 5:1,2
Rehefa nisaraka tamin’Andriamanitra ka nanompo sampy indray ny Isiraelita, dia nampahorin’ireo fahavalony fatratra izy ireo. Tandindomin-doza mandrakariva ny fananana, eny hatramin’ny ain’ny olona ihany koa aza. Noho izany dia tsy nisy mponina ny tanàna sy ireo fonenana mitokantokana, fa nivondrona tao amin’ireo tanàna mimanda ny olona. Tsy nodiavina ny lalambe, fa nivezivezy tamin’ny alalan’ny sakelidàlana tsy misy mpandeha ny olona. Maro no voaroba, ary novonoina koa aza, tamin’ireo toerana fakan-drano, ary fanampin’izany fahoriany izany, dia tsy nanana fitaovam-piadina ny Isiraely. Tsy nisy sabatra na lefona, na dia iray monja aza, hita teny an-tanan’ny lehilahy efatra arivo.
Nisentosento teo ambanin’ny ziogan’ny mpampahory azy nandritra ny roapolo taona ny Isiraelita. Rehefa izany dia niala tamin’ny fanompoan-tsampiny izy, ka tamim-panetren-tena sy fibebahana no nitarainany tamin’Andriamanitra mba hanafaka azy. Tsy foana tsy akory ny fitarainany.
Nisy vehivay iray nilaza noho ny toe-panahy nananany nitoetra teo amin’ny Isiraely, ka tamin’ny alalany no nosafidin’i Jehovah hanafahana ny vahoakany. Debora no anarany. Fantatra amin’ny maha-mpaminanivavy azy izy, ka rehefa tsy teo ireo mpanapaka mahazatra, dia nitady azy mba hanolo-tsaina sy hitsara ny olona.
Nampahafantatra an’i Debora ny fikasany handringana ny fahavalon’ny Isiraely i Jehovah, ka nibaiko azy mba haniraka ka hiantso lehilahy iray antsoina hoe Baràka, avy aminn’y taranak’i Naftaly, sy hampahafantatra azy, ireo toromarika izay voarainy avy tamin’Andriamanitra. Araka izany, dia naniraka ka niantso an’i Baràka izy, ka nibaiko azy mba hamory lehilahy iray alina avy amin’ny taranak’i Naftaly sy Zebolona, ka handeha hiady amin’ireo miaramilan’ny mpanjaka Jabina.
Nankalaza ny fandresen’ny Isiraely tamin’ny hira kanto sy mientanentana indrindra i Debora. Nomeny an’Andriamanitra avokoa ny voninahitry ny fanafahana azy ireo, ary nibaiko ny olona izy mba hankalaza Azy noho ny asany mahagaga. ST,16 Jona 1881.